The Xperia Z5, Z4 Tablet na Z3 ga-enweta mmelite ahụ na Nougat | Gam akporosis
Nougat kwalite maka Xperia Z5, Z4 tablet na Z3 na-enweta asambodo PTCRB
Sony bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma nke na-eme omume na obodo ndị ọrụ ya mgbe ọ na-ahapụ ịhapụ mmelite na nke abụọ nke ngwaọrụ ndị bịara dị ka ihe ndabere otu afọ tupu mgbe ahụ. Ee, ọnụahịa ndị ahụ na-ere anyị dị ka ihe dị mkpa nke ekwentị, n'afọ na-esote ha ka dị dị ka ọbọgwụ duck nke ọtụtụ ụlọ ọrụ fọrọ nke nta ka echefu, mana ha na-ekwu ya ndị nwere Samsung dị elu.
Mgbe Xperia X, X Compact, XZ na Nrụpụta X Ha emeela gị ukara na-eje ozi nke gam akporo NougatO yiri ka ọ bụrịrị oge maka Sony dị elu Sony afọ gara aga na nnukwu Z5 ahụ, ọnụ na-aga n'ihu na-adị oke mma. Ọbụghị naanị na nkwalite dị nso na Nougat na-anọgide na Z5, mana Z4 Tablet na Z3 + na-enweta asambodo nke na ụbọchị ole na ole, a ga-ebugharị ndị nwe ọdụ ndị ahụ gburugburu ụwa.
Na-agafe PTCRB asambodo, otu n'ime ngwaọrụ ikuku nke ndị na-ebu North America duziri, pụtara na n'oge na-adịghị anya nwelite na Nougat kwesịrị ịkụ ala maka Sony Xperia Z5, Z4 Tablet na Z3 +.
Mmelite a ga-ebu nọmba ụdị ugbu a nke ụlọ ahụ site na 32.2.A.5.11 na mbipute 32.3.A.0.372. Anyị enweghị ike ịtụ anya uru ndị ga-abịa na mmelite ahụ, mana ọ ga-aga aka na ihe a hụrụ na njedebe Sony dị elu na afọ gara aga, yabụ Doze na-arụ ọrụ ọbụlagodi n'akpa uwe ogologo ọkpa ahụ na ụzọ mkpirisi ndị ahụ site na desktọọpụ Ha kwesiri ịnọ na gam akporo 7.0 maka Sony.
Un obere ndidi n'ihi na ndị nwe ndị ọnụ ga-enwe Nougat n'oge na-adịghị anya tupu asịrị banyere ihe ga-abụ gam akporo O.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » Nougat kwalite maka Xperia Z5, Z4 tablet na Z3 na-enweta asambodo PTCRB
Chere. Nwere ike nougat nata xperia.xa ultra na Jenụwarị?
Google Pixels nwere nsogbu mgbe ị na-ebufe faịlụ na kọmputa Mac